Ibhuku ripi randinopa Krisimasi ino? | Zvazvino Zvinyorwa
Ibhuku ripi randinopa paKisimusi ino?
Carmen Guillen | | Fantasy, Type, Literature, Nhema nhema, Nhetembo, dzakawanda
Chokwadi paunoverenga musoro wenyaya ino wakanyora mauri-kuti uwane mazano ekupa vadikanwi vako Kisimusi ino. Uye ndizvo izvo dzimwe nguva, iyo yekupa chimwe chinhu kune mumwe munhu akakosha kwauri inova yakaoma zvikuru. Isu tinorwiswa nekusahadzika kwekuti haazozvifarire here, kana chiri chidiki kune iye munhu akakosha, nezvimwe. Asi chimwe chinhu chandinogona kukuudza uye chandakavimbisa mumakore ese aya ndechekuti chipo chakanakisa chaunogona kupa kumunhu anofarira kuverenga, uye zvakakosha kusimbisa iyo yekupedzisira, iye anofanira kuda kuverenga, ndizvo bhuku rakanaka.
Nhasi tinoda kubva Zvazvino Zvinyorwa kukubatsira zvishoma neichi chakaoma, dzimwe nguva basa uye isu tiri kuzokupa iwe akateedzana e Classified mazita murudzi rwemunhu waungade. Zvinozivikanwa kune vese kuti munhu anofarira nhoroondo yenhoroondo haafanire kuda rondedzero, uye nekudaro neese akareba marongero emhando dzemabhuku atinogona kuwana nhasi pamusika.
1 Kune vanoda nhoroondo yenhau, nhema nhema uye zvinonakidza
2 Kune vanoda zvekufungidzira uye nhoroondo vane moyo
3 Kune vanoda vhesi uye akanaka mabhuku
Kune vanoda nhoroondo yenhau, nhema nhema uye zvinonakidza
Kune aya marudzi matatu evanhu tine zvinotevera zvinokurudzirwa:
«Michato mitatu yaManolita»Yemunyori mukuru wechiSpanish Almudena Grandes: Kana iwe uchishuvira kana kufarira nhoroondo yenhoroondo, tinokurudzira iyi huru novel kuti ikupe. Pave nemwedzi yakati wandei ari mumabhuku gumi epamusoro-soro ari muchikamu che "ngano". Icho chiri chechimwe chinhu chisiri? Iri ibhuku iro sekureva kwevaverengi varo raiita serakanyanya kunyanya kukosha nekuda kwemapeji arinopfuura mazana manomwe, asi kuti gare gare kuverenga kwaro kunova kwakareruka uye kunonakidza. Unogona kuitenga kuEditical Tusquets kwemazana makumi maviri nemaviri euros.
"Mazuva ekuchengetedza" de Carlos Perez Merinero: Kune vanoda rondedzero inosiririsa uye yechinyakare yetsotsi tinokurudzira zita iri. Cherekedza: Haikodzeri matumbu anonamira!
"Murwere" de Julio Gomez-Jury, Edhisheni Planeta: Iyi novel inonyatsozadzikiswa nekuti inounza zvese pamwe chete: kunyengera, manzwiro, makuru mavara, manzwiro, etc. Iyo novel inobata muverengi zvishoma. Inonakidza kwazvo!
Kune vanoda zvekufungidzira uye nhoroondo vane moyo
"Pasi penyeredzi imwe chete" de John Green: Kana munhu waunoda kupa bhuku kuti abvunde uye akabatwa nenyaya yakajairika yenyaya yerudo rwunetsekana pasina mhosva, iri ibhuku rako. Iri bhuku remanzwiro akasimba, akaunzwa kune yakakura screen gore rino. Iine ongororo yakanaka kwazvo uye yanga iri pane yakanyanya kutengesa runyorwa kwemwedzi mishoma.
"Hupenyu hwaive uhwo" de Carmen amoraga: Iri bhuku rave Nadal Mubairo 2014. Ndinofanira kureurura kuti ndiro bhuku randiri kuverenga parizvino nekuti ndakatorwa moyo nemusoro waro uye nharo dzaro. Kune avo vanoda hupenyu kupfuura zvimwe zvese uye vanogara vachinetseka kuti basa ravo nderei muhupenyu hwavo uye nehwevamwe. Inonakidza kwazvo, inonakidza uye panguva imwechete inoita kuti tifunge uye tifungisise zvinhu ...
Iyo trilogy ye "Ndangariro dzaIdhun" de Laura Gallego: Iyi trilogy haina kubva gore rino, kunyangwe kubva kune yapfuura ... Iyo yatove nemakore akati wandei kuseri kwayo asi haina kukosha kwakaderera kweizvozvo. Uku kurudziro yemunhu. Iwo aive ekutanga mabhuku efungidziro andakaverenga uye vakandisiya ndave ndakabatirira zvachose. Ndinoyeuka yekutanga kwemabhuku, "Kuramba", Ndakaiverenga mukati rinopfuura vhiki uye ndaifanira kuenda ndichimhanyira wechipiri wavo, "Utatu". Iwo mabhuku anokukochekera zvakanyanya, kuwedzera kune fungidziro yenyika iyo mairi, Idhún, inodzidzisa tsika uye kubata pamisoro dzakasiyana siyana: rudo, hushamwari, kutengesa, kushamisika, kusazivikanwa, kutya, nezvimwe. Yetatu mune iyi trilogy inonzi "Pantheon" asi ndinoikurudzira zvizere uye nekurwisa kumwe nekuti inyaya yakakosha kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Kune vanoda vhesi uye akanaka mabhuku
Kana munhu iyeye chaiye waunoda kupa bhuku sechipo anoda nhetembo, ini ndinokurudzira chero e Mario Benedetti, mudetembi wenhetembo uye munyori mukuru. Kana, kune rumwe rutivi, uchida nhetembo dzazvino uno, bhuku rakanzi "Nyaya inosuruvarisa nezve muviri wako pamusoro wangu" de marwan, muimbi mukuru wechiSpanish-munyori wenziyo uye mudetembi. Rwiyo rwake ruzere nemanzwiro, chokwadi, misodzi ...
Kune vanoda mabhuku akanaka ini ndinokurudzira anotevera echinyakare: "Makore Mazana Ekusurukirwa" yemudzidzisi mukuru Gabriel García Márquez, "Hopscotch" de Julio Cortazar o "Mhuri yePascual Duarte" de Camilo Jose Cela.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Fantasy » Ibhuku ripi randinopa paKisimusi ino?
Kubudirira kwekuda kuziva kwebhuku "Paradzai dhayari iri" naKeri Smith
Ongorora: 'Grey Wolf', naJames Nava